सिक्किममा पवन चाम्लिङको दलका १० विधायक भाजपामा प्रवेश
काठमाडौं – सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एसडीएफ) का नेता पूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चाम्लिङलाई छोडेर पार्टीका १० विधायक भारतीय जनता पार्टीमा प्रवेश गरेका छन् ।
भाजपाका कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा र पार्टी महासचिव राम माधवको उपस्थितिमा ती विधायक मंगलवार भाजपा प्रवेश गरेका हुन् ।
लोकसभा चुनावसँगै सिक्किममा विधानसभा चुनाव भएको थियो । चुनावमा चाम्लिङले २५ वर्षदेखि चलाएको सत्ता जोगाउन सकेका थिएनन् । चुनावमा भाजपाले एक सीट पनि जितेको थिएन ।
राम माधवले भने, ‘एसडीएफका १३ विधायक थिए । पार्टीको विधायक दलले भाजपामा प्रवेश गर्ने निर्णय लियो । पूर्वोत्तरमा सिक्किम बाहेक सबै राज्यमा भाजपाले क्षेत्रीय दलहरूसँग गठबन्धन गरेको थियो । सिक्किममा एसडीएफका विधायकहरू भाजपामा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ पनि सरकार बनाउने बाटो खुलेको छ ।’
कुनै पनि पार्टीका दुईतिहाइ विधायक अन्य दलमा प्रवेश गरेमा दलपरिवर्तन विरोधी कानून आकर्षित हुँदैन ।
चाम्लिङ सन् १९९४ देखि २०१९ सम्म राज्यका मुख्यमन्त्री थिए । उनले लगातार २५ वर्ष सिक्किममा सत्ता चलाएका थिए । उनको दललाई ६ महिनाअघि गठन गरिएको सिक्किम क्रान्तिकारी पार्टीले हराएको हो ।
विधानसभामा रहेका ३२ सीटमध्ये एसडीएफले १५ र एसकेएमले १७ सीट जितेका थिए । सत्ताका लागि १७ सीट आवश्यक हुन्छ । एसकेएमका प्रेम सिंह तामाङ मुख्यमन्त्री बने ।
बीआरआईबारे हाम्रो सोचाइ साँघुरो भयो, फाइदा लिनै सकेनौं : डा. राजीव झा [अन्तर्वार्ता] पूरा पढ्नुहोस
बीआरआईबारे हाम्रो सोचाइ साँघुरो भयो, फाइदा लिनै सकेनौं : डा. राजीव झा [अन्तर्वार्ता] डा. राजीवकुमार झा सानै उमेरमा विदेशी विश्वविद्यालयमा प्रोफेसर बन्ने नेपाली युवा हुन् । चीनको सियान विश्वविद्यालयमा अध्यापनरत प्रोफेसर झाको नाममा रिसर्च सेन्टर नै स्थापना भएको छ । चिनियाँ उच्...